ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ တောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » ဥစ္စာစောင့်တွေရှိတဲ့ တောင်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on May 14, 2012 in Travel | 37 comments
ဥူးဥူးထုပ်ရေ ၊ အဲ့ဂူပေါက်ပုံအထိ ရိုက်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ ၊ ဂူထဲ ကို သေချာပေါက် ရောက်ခဲ့မှာ သေချာပါဘဲ ။ ဥူးဥူးထုပ် အနေနဲ့ ဂူထဲက ရွှေငွေရတနာတွေ တထောကြီး ရခဲ့တယ်ဆိုရင် ဟောဒီက ကန်းထရီးမောင်ပေ ကို လဲ မစပါဦးဗျ ။
ရှူးးးးးးးးးးး တိုးတိုး …
တခြားသူတွေ ကြားသွားဦးမယ် ..
အထူးသဖြင့် ဗိုက်ကလေးပေါ့ ….
ကိုအံစာ ဥစ္စာစောင့်မလေးတွေက သိပ်ချောတယ်လို့ကြားဖူးတယ်။
အားပေးပါတယ် ဒီလို လေးတွေဆက်ရေးပါလို့
အမေနဲ့ မလိုက်ရဘူးလို့ အမြဲတားမြစ်ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်…
ကျောင်းရဲ့ ဒကာမကြီးဆိုပြီးအလေးထားပြီးဆက်ဆံခဲ့တာတွေ့ ခဲ့ရဘူးတယ်..။
ကျိုက်ထီးဆောင်းဥစ္စာစောင့်အသိုက်ကလာတာလို့ သူတော်စင်အဖိုးကပြောပြထားလို့ ..
လူ့ ဘ၀မှာနေခွင့်ရဘို့ အတွက်သိုက်မှာသွားပြီးခွင့်ပန်ရတယ်..
ဟုတ်တဲ့ပါ အုလေး ဗြဲသီးချင့် ..
လာလည်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် အမြဲတမ်း ဝဲလကမ်းပါချင့် …
ဥစ္စာစောင့် မလေးတွေက ချောတယ်လို့ ပြောတာ ကြားဖူးသလို …
အနီးရောက် ရောက်သွားရင် တစ်ခါတစ်ခါ အဘွားအိုကြီး ဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့လည်း ..
ခုလို လာရောက် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါလို့ …
အဲဒီဂူက ခုတော့ ပိတ်သလောက်ကို
ဖြစ်နေပါပြီ ခင်ဗျ ..
လာရောက် အားပေးတာ ကျေးကျေးပါ …
ခုလို လာရောက်ပြီး အားဖြည့် ပြောကြားပေးတာ
ကျနော်တို့ ရွာဘက်တွေမှာတော့ ဥစ္စာစောင့်နဲ့
သရဲအကြောင်းတွေက တော်တော်လေးကို အပြောများတယ် ခင်ဗျ ..
ဥစ္စာစောင့်အကြောင်းကတော့ စိတ်ဝင်စားတယ် မောင်အံဇာရေ၊ အမအမေ ပြောပုံအရတော့ အမကိုသိုက်ကလာတာဆိုပဲ။ အမ မမှတ်မိတော့တဲ့ငယ်ငယ်တုန်း က ပြောတာတွေကို သူပြန်ပြောပြတာစိတ်ဝင်စား ဖို့တော့ ကောင်းသား။
မိုချိုလေး သိုက်ကို မပြန်ရအောင် ဂေဇက်က အူးပေ က မေတ္တာ နေ့တိုင်းပေးနေပါတယ်ကွယ်။ ယူပါနော်
သူ့ဘဲဘဲဂျီးက ပြန်ပေးလိမ့်မယ် ..
ရော့ … အင့် .. ဆိုပြီး ..
အမေဒစ်ကင်န် အာမီ ကို ပြစားကြစို့ …
အိုဘယ့် ဂျင်းနီးစ် အင်သည် ဘော်တယ်လ်
အံစာတုံး ပြောတဲ့ ဥစ္စာစောင့်တွေအကြောင်းတော့
ကြားဖူးပါတယ်..ဒါပေသိ ဂူပေါက်တွေ လျှောက်ဝင်ကြည့်တာတော့
အူးလေး ရာဇာတုံး ..အူးလေးရာဇာတုံး
စိန်တွေရှိရင် ကျနုပ်ကို သတင်းပို့ ပါ
မြေတွေရှိရင် အူးပေကို သတင်းပို့ ပါ
Country Bike ka lay
ခြောက်မျက်နာရေ….တကယ်လား?..အဲဒါတွေကတော့ ငယ်ငယ်က အိပ်ယာဝင် ပုံပြင်တွေနဲ့တူပါတယ်။ သိပ်တော့မယုံကြည်ဘူး။
အင်ဒီယာနာဂျုန်း သိရင်တော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ထင်တယ်။
ကျနော်လည်း လူကြီးတွေရဲ့ ပါးစပ် ရာဇဝင်အရ သိရတာပါ …
ကိုယ်လည်း မမှီ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးတော့ (ဘယ်တွေ့ဖူးမလဲ၊ အဲလို နေရာမျိုး တစ်ယောက်တည်းဆို ယောင်လို့တောင် ခြေဦး မလှည့်ဘူး .. ) ..
ဘယ်လို ပြောရမလဲပေါ့ဗျာ …
မားကတ်တင်း မာစတာ ကိုဂီ ခင်ဗျာ….
ကျုပ်တို့ရွာက ဥစ္စာစောင့်တွေကို အမေဒိကန်ကို ခေါ်သွားပြီး
သဂျီးနဲ့ပေါင်း ပြစားမလို့လားဗျ …
ဟုတ်ပါတယ် ကိုကြီးရေ ..
အကောင်ဗလောင် မြွေပါးကင်းပါးက ပေါများပါဘိသနဲ့ ..
ဒါကြောင့် ဝင်ပါဘူးလို့ ..
ကိုကြီးက နဂါးဘက်ကို ကျင်လည်ခဲ့ဖူးတော့ ..
ဒီအကြောင်းတွေ ကြားဖူးခဲ့တာ ထင်ပါတယ်ဗျာ ..
ဟက်လို .. ဟက်လို ..
ဗိုက်ကလေး လား …
ဗိုက်ကလေး လား ….
ဒီမှာ .. ဒီမှာ .. တွေ့နေပြီဗျို့ ….
ဥစ္စာစာစောင့်ဆိုတာ တကယ်ရှိ တာလား?
မြင်ဖူးတဲ့သူ တကယ်ရှိတယ်ပေါ့ .. ? တဆင့်ကြားမဟုတ်ဘဲ၊ အရက်မသောက်ဘဲ၊ စိတ်လည်းကြည်လင်နေတဲ့ အချိန်မှာ မြင်ဖူး တယ်ပေါ့ .. ?
ကျွန်တော် မေးတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး ..
ကြက်တို့၊ လူသေးသေးလေးတွေ ညဘက်မှာတွေ့တာတို့၊ သချိုင်းကုန်းမှာ သရဲတွေ့တာတို့ ဆိုတာ
အများစုက အရက်သောက်ပြီး အရက်ကြောင်ကြောင် ပြီး တွေ့တာ ဖြစ်ပါတယ် .. မယုံရင် အရက်ဖြတ်ဆေးရုံ ကလူနာတွေ ဆီမှာ သွားမေးကြည့်ပါ ..
နောက် ….. သရဲနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ယနေ့ခေတ်မှာကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ဖြစ်နေတာကတော့ အသံနိမ့်လှိုင်းနဲ့ သရဲ ဆက်စပ်မှုပါဘဲ
သိပ္ပံပညာ ရှင်တွေ က infrasonic waves တွေဟာ လူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားကို ဆုတ်ယုတ်စေတယ်၊ အာရုံထင်ယောင်ထင်မှားမှုတွေ ဖြစ်စေတယ် လို့ ပြောလာကြပါပြီ ။
ဒါဆို ဥစ္စာစောင့်တွေကရော .. ? တကယ်ဘဲ လား ? သူများပြောတာလား ? အတုအယောင်လား ?
သရဲတကယ်တွေ့ဖူးတဲ့သူရှိရင် ပြောပြကြပါနော် ..
သရဲတွေ ဘာတွေတော့ မမြင်ဖူးဘူး … မှင်စာခြောက်သံတော့.. တကယ့်ကို နားနဲ့ ဆတ်ဆတ်ကြားခဲ့ဖူးတာ… ။
ကိုetone
ကြားဖူးတာကို ပိုပြီးတိကျအောင် ပြောပြပါလား ..
http://myanmargazette.net/29674/creative-writing/drama-essays-humor-memoirs-novel-excerpts-short-stories မှာ အဲ့ဒီ မှင်စာခြောက်သံအကြောင်း ရေးခဲ့ဖူးပါတယ် … ။
ကျနော်လည်း ကျတ်တစ္ဆေတွေရဲ့ အသံကို
ကိုယ်တိုင် နားနဲ့ဆတ်ဆတ် ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် ..
ဒါကို ကျွန်တော် ကြားခဲ့ရသော ကျတ်တစ္ဆေတို့၏ အသံများ ဆိုပြီး
ဒီရွာထဲမှာ ပို့စ် တင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ..
ကိုအံစာတုံးရေ … မြန်မာတွေ …. ပွဲလန်းသဘင်တွေမှာ လက်ဝတ်ရတာတွေ ၀တ်ပြီး ရှိုးထုတ်ကြွားဝါခဲ့တာလည်း ရာဇ၀င်ထဲထိတောင် ကျန်ခဲ့ပါလားနော် … အခုဆို ပြောင်းလဲလာတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲက မျောလွင့်လာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုလိုက်ပြီး .. အတုံးလိုက် အတတ်လိုက် ဘယ်သူမှ မ၀တ်တော့ဘူး … ။ အရင်ကလို လက်ကောက်တွေ တစ်ထောင်ဆစ်လောက်ထိ ၀တ်ထားလျှင်တောင် … တိုက်ဂေါကြီးလားလို့ ….. ဗျူးကြည့်တတ်ကြတယ် … ။
ဟိုဂူပေါက်က ၀င်ရော ၀င်လို့ ရရဲ့လားဟင် … ။ အထဲမှာ အောက်ဆီဂျင်ရော ရှိရဲ့လား … ။
အပ်ချည်ကြိုးသာ ကုန်သွားတယ် ဂူက မဆုံးသေးဘူးဆိုလျှင်တော့ … မီတာငါးထောင်ပါတဲ့ အပ်ချည်လုံးသာ ကိုင်သွားပါတော့ ။
ကိုကြီးအံရေ ……… ကျောက်ပုထိုးတောင်ရဲ့အကြောင်းညီမသိနေတယ် …….. ဘယ်သူတင်တာလဲမသိဘူး …… ဘယ်မှာဖတ်ဖူးလဲမသိဘူး သိပ်တော့မကြာသေးဘူး ……… ကိုကြီးအံပဲတင်တာလား …….. ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ ပြန်ဖတ်သွားပါတယ် ………….
ရွာထဲမှာတောင် ဥစ္စာစောင့်မလေး နှစ်ယောက်ရှိတယ်
သူတို့ကို အခြားသူတွေ သိသွားရင် သိုက်ကို ပြန်သွားရမှာစိုးလို့
ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပါနဲ့ဆိုလို့ မပြောဖြစ်သေးတာပါ
အဲဒီ ဥစ္စာစောင့်မလေး နှစ်ယောက်က ..
ခုတော့ တစ်ယောက်တော့ ပေါ်လာပြီ ..
ဥစ္စာစောင့်မလေး ကျမ ဆိုပြီးတော့ ..
အဲဒီ ဂူပေါက်ထဲက ခု ဝင်ဖို့ လွယ်တော့ပါဘူးဗျာ ..
အမအိတုံကတော့ ရှေးလူတွေ ကြွားလုံး ထုတ်တတ်တာကိုလည်း မြင်တာပဲနော့ ..
ကျနော် ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဥစ္စာစောင့်နှင့် တောအစောင့်များ အကြောင်း ဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ရေးခဲ့ဖူးပါဂျောင်း ..
တွေ့ရား တွေ့ရား တမီးကျောတာမှန်တယ် တမီးဦးနှောက်ကောင်းဒယ် …. ကိုကြီးအံရေး ဖူးတယ် … အဟိ အမှန်ပြောရရင် ဖတ်ဖူးတာပဲသိတယ် ဘယ်သူဘယ်တုန်းကလုံးဝမမှတ်မိတော့ ၀ူး …….. (၁) ယောက်ထဲမို့လိုသာ ဒီလောက်ဖြစ်နေတာ (၂) (၃) မွေးထားရင် ထမီတောင်ပါ မှာမဟုတ်တော့ဘူး …… မေ့တတ်လိုက်တဲ့ ဦးနှောက် ……..
သရဲ ဆိုတာ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ ဖူးသလို နပန်း လည်း လုံး ဖူးတယ်။ မှင်စာလည်းအသံနဲ့ တကွ တွေ့ ဖူးတယ်။ ကျမက တစေ သရဲ ရှိတာ လက်သင့် ခံ သလို သိပ် မကြောက် တတ်တဲ့ အတွက် အမျှအတန်းလိုချင်တဲ့ သူတို့ တွေ ကိုယ်ထင် ပြတာ မကြာခဏခံရတယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျမရဲ့ ဥစ္စာစောင့် ဇာတ်လမ်း လည်း တင်ပါအုံးမယ်။
အန်တီအိ လဲ ဥစ္စာစောင့်အကြောင်း သိုက်အကြောင်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်…
ကိုယ်တွေ့လဲရှိတော့ ယုံတယ်…မယုံတဲ့သူတွေလဲ ရှိမှာပါ…
မိုချိုတင်မဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး စောင့်နေမယ်နော်…
အန်တီမိုးချိုက သတ္တိခဲကြီးပါလားဗျ ..
သရဲနဲ့တောင် နပန်းလုံးဖူးတယ် .. တဲ့ ..
အဲဒါလေး ရေးပါဦးလားဗျ …
ကို အိတုန် .. ပြောတာ လည်း ဟုတ်နေတာဘဲ နော် .. မှင်စာတွေ တကယ် ရှိတယ် ..
အင်း .. လောကကြီးက လည်း လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နေတာဘဲ ..
ဒါပေမယ့် ကိုအိတုံက .. ကြားဖူးတယ်လို့ဘဲ ပြောတာနော် .. မမြင်ဖူးဘူး .. ပြီးတော့ သေသေချာချာလည်း သက်သေပြလို့မရဘူး (ကိုအိတုံကို လျှောက်ပြောတာလို့ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး .. ကျွန်တော်ပြောတာ ကိုအိတုံက အဲ့အသံကြားလိုက်ရတာမှန်တယ် ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မှင်စာပါလို့ သက်သေမပြနိုင်သေးဘူး အဲ့လိုပြောတာပါ)
ဒီ့ထက်ပိုပြီး သက်သေပြနိုင်တဲ့ ရွာသား တွေများ ရှိမလား .. ရှိရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ..
လာကြည့် ပြမယ်ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့ ..
(ဒီလို သာတကယ်ကြည့်လို့ရရင် စီးပွားရေးကောင်းကောင်းလုပ်လို့ရပြီ .. ပြစားပြီးတော့လေ.. )
ဥစ္စာစောင့်တွေဆီက ရွှေ၊ ငွေ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွေငှားရမ်းလို့ ရတယ်တို့…
တစ်ချို့ဆို အိုးခွက်ပန်းကန်တွေပါငှားတယ်တို့ ကြားဘူးတယ်…
မနေ့က ကျနော် ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောရင်းနဲ့ ပြောဖို့မေ့ခဲ့လို့ဗျာ။ ခင်ဗျားကို ကျနော်စသိတာက ခင်ဗျားရေးတဲ့ ဖုတ်ဝင်နေတဲ့ ဒေါ်စိန်သော့ အကြောင်းကနေ စသိတာဗျ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ခင်ဗျားရေးတဲ့ သရဲအကြောင်းတွေကို ကျနော်စောင့်ဖတ်တယ်။ ကြိုက်လည်း ကြိုက်ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ရတာလဲ တခါတလေ အရသာတခုပဲဗျ။
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ..
ကျနော် ကြားဖူးတောတော့ ရွှေငွေတွေ ငှားတယ်လို့ ကြားခဲ့ဖူးပါတယ် ခင်ဗျ ..
ခုလို ကျနော့်ပို့စ်ကို လာရောက် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ ..
ကျနော့်ကို စသိတာ ဖုတ်အကြောင်းကကိုး …
ခုလို ကျနော့်ပို့စ်ကို လာရောက် အားပေးကြသူအပေါင်းကို
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ..
တစ်နေ့လုံး ရုံးထဲ ရောက်နေပါသဖြင့် ..
မြင်သာမြင် မကြင်ရတဲ့ ဘဝရယ်ကြောင့် ..
ချက်ချင်း Reply မလုပ်နိုင်သည်ကို ခွင့်လွတ်တော် မူကြပါကုန်လော့ အရပ်ကတို့ …
ခပ်လန်းလန်း အုတ်စာ ဇောင့်မလေး
တစ်ယောက်လောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါလားဟင် ဦးအံဇာ…..
အဆင်ပြေရင် သား အကောင့်ပါ
ရေနံချောင်း မြို့နယ်ထဲမှာပါဗျာ ..
ဘာဖြစ်လို့ မေးတာလဲ မသိဘူး ..
နောက်အခါ သွားလို့ တွေ့ရင်
ပေးခဲ့မယ်နော် .. စိတ်ချ သိရား ..
ရွှေမန်းကျည်းသီးတောင့်တွေ ရော တွေ့ခဲ့သေးလား။ အစောင့်တွေကရော သိပ်လှတာပဲလား